Turkish Airlines neBelavia hazvichabhururuke vatorwa vekuIraq, veSyria neYemeni kuenda kuBelarus
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Turkish Airlines neBelavia hazvichabhururuke vatorwa vekuIraq, veSyria neYemeni kuenda kuBelarus
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Turkish Airlines neBelavia hazvichabhururuke vatorwa vekuIraq, veSyria neYemeni kuenda kuBelarus.
Zvinoenderana nechisarudzo chevakuru vane hunyanzvi hweTurkey, kutanga Mbudzi 12, 2021, vagari veIraq, Syria neYemen havazogamuchirwe kutakurwa nendege kubva kuTurkey kuenda kuBelarus.
Ndege yenyika yeBelarusian haitenderi vaIraq, Syria neYemeni vanotama kuti vakwire ndege kubva kuTurkey kuenda kuBelarus.
Turkish Airlines haisi kuzotengesa matikiti endege eBelarus kune vagari veIraq, Syria neYemen.
European Union inoisa mutoro wedambudziko revanotama zvisiri pamutemo pamwe chete nemudzvanyiriri weBelarusian Lukashenko.
Pasi pekutyisidzirwa kwezvimwe zvirango, Belarusian national flag carrier, belavia, yakazivisa kuti yamira kugamuchira vagari veIraq, Syria neYemen pandege dzayo kubva kuTurkey kuenda kuBelarus.
"Maererano nesarudzo yevakuru vane masimba veTurkey, kutanga Mbudzi 12, 2021, vagari veIraq, Syria neYemen havazogamuchirwe kutakurwa nendege kubva kuTurkey kuenda kuBelarus," belavia chirevo chebasa renhau chinoverengwa.
Pakutanga, Turkish Airlines yakazivisawo kuti haisi kuzotengesa matikiti endege kuenda kuBelarus kune vagari veIraq, Syria neYemen, vachipihwa dambudziko rekusatama zvisiri pamutemo pamuganho weBelarusian-Polish.
Kunze kuchaitwa chete kune vafambi vane diplomatic passports.
Dambudziko rekutama pamiganhu yeBelarusian neLatvia, Lithuania nePoland, uko vatami vasingabvumirwe vakatanga kudirana kubva pakutanga kwegore rino, vakapinda mugiya rakakwirira munaNovember 8.
Zviuru zvakawanda zvevanhu vakasvika kumuganhu wePoland kudivi reBelarusian ndokuedza kuyambuka vachipinda muPoland. Mukuda kuvhomora bhodha vakabva vatyora wire ine minzwa.
Nyika dzeEuropean Union (EU) dzakaisa mutoro wekuwedzera nemaune dambudziko revanotama zvisiri pamutemo neMinsk neBelarusian mudzvanyiriri Lukashenko, uye vakadaidzira kuti zvirango zviwedzere.